Tian'ny IBM ny supercomputers quantum-ny hazakazaka mihoatra ny 4000 qubits | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 12/05/2022 23:15 | About us
Nanambara i IBM fa mikasa ny hanitatra ny faniriany quantum ary nohavaozina ny tondrozotra miaraka amin'ny tanjona misongadina kokoa, "Miasa rafitra 4000-qubit amin'ny 2025". Mety ho toa tsy ho vita mihitsy ny fanamboarana fitaovana iray izay tena misambotra ny fihetsiky ny atôma ary afaka manararaotra ireo fihetsika ireo hamahana ireo olana henjana indrindra amin'izao androntsika izao raha mametra ny fisainanao amin'ny tontolon'ny informatika mahazatra ianao.
Tao anatin'ny andro nivarotana ny vondrona Watson Health, IBM dia nanambara fa ny modely vaovao amin'ny mainframes Z-series dia ho tonga "amin'ny faran'ny tapany voalohany" amin'ny 2022, manamarika fa ny fanombohan'ny ekipa dia ho loharanom-bola mitombo ho an'ny ny orinasa, ny fotodrafitrasa orinasa.
Niady hevitra teo amin'ny indostria ny vaovao, satria toa "niala" tamin'ireo "rafitra tranainy lehibe" ireo ny Big Blue mba hifantoka amin'ny orinasa mampidi-bola kokoa toy ny rahona hybrid sy ny artificial intelligence (AI). Na izany aza, nanome toky ny mpampiasa vola ny orinasa fa mbola liana ny mpanjifa "sasany".
Araka ny voalazan'ny IBM, mbola misy ny tsenan'ny mainframe ary manome ny orinasa amin'ny fampiakarana ny fidiram-bola. Mba hanaovana izany, dia manomana tsingerina vaovao ny solosaina mainframe ho an'ny faran'ny tapany voalohany amin'ny taona.
Ny tatitra ara-bola farany momba ny fidiram-bola Big Blue dia ny 2021/16,700/57,000. Nandritra ny antso, ny CFO James Kavanaugh dia nanoro hevitra fa ny famoahana vaovao dia hisy fiantraikany tsara amin'ny fidiram-bolan'ny IBM, izay $ 35,000 lavitrisa amin'ny telovolana ary $ XNUMX lavitrisa hatramin'ny $ XNUMX lavitrisa amin'ny taona.
Efapolo taona taorian'ny nanombohan'ny informatika quantum, IBM dia vonona ny hamoaka ny teknolojia ao amin'ny laboratoara ary ho fampiharana azo ampiharina kokoa toa ny supercomputer! Ny orinasa dia efa nandalo dingana maromaro amin'ny fampandrosoana nanomboka tamin'ny famoahana ny sori-dalana quantum teo aloha tamin'ny taona 2020, anisan'izany ny processeur Eagle 127-qubit mampiasa circuitry quantum sy ny Qiskit runtime API.
Mba hanaovana izany, IBM dia mikasa ny hahazo andiany processeur maromaro mba hifandraisana amin'ny andaniny sy ankilany. Izany dia tokony hitarika amin'ny famolavolana drafitra fanalefahana ny fahadisoana tsara kokoa sy ny fandrindrana tsara kokoa eo amin'ny processeur, singa roa ilaina ho an'ny solosaina quantum azo ampiharina rahampitso.
Ankoatra izany, IBM hamolavola sy hampihatra ireo mpanelanelana ambaratonga chip, izay "hampifandraisina mafy ny chips maromaro mba hamoronana processeur iray lehibe kokoa", araka ny filazan'ny orinasa, ary avy eo dia hanangana rohy mifandray amin'ny quantum mba hampifandray ireo multiprocessors lehibe kokoa, eny fa na dia ao anatin'ny cluster lehibe kokoa aza: mampifandray ireo vondrona lehibe kokoa hatrany. mandra-pahaforon'izy ireo sehatra informatika 4000-qubit modular.
Toy izany, IBM dia namoaka andiana programa efa vonona hampiasaina tamin'ny fiandohan'ity taona ity, "fandaharana efa vita mialoha izay ahafahan'ny mpamorona miditra mora amin'ny valin'ny kajy quantum nefa tsy mila fahatakarana saro-pady momba ny fitaovana," hoy ny fiaraha-monina. IBM dia mikasa ny hanitatra ity andiana programa ity amin'ny 2023, ahafahan'ny mpamorona mampandeha azy ireo amin'ny processeur quantum parallèle.
Hitondra olana nomena ireo rindranasa ireo, zarazarao ho programa kely kokoa sy klasika, karakarao ireo dingana ireo amin'ny parallèle na amin'ny andiany, izay mahomby indrindra, ary avy eo dia mampiasa sosona orkestra iray mba "mamatotra" an'ireo workflows samihafa ireo miaraka. vokatra mirindra izay ho azon'ny ordinatera mahazatra. IBM dia miantso ny fotodrafitrasa fivorian'izy ireo Quantum Serverless, ary araka ny tondrozotra vaovao dia hampihatra ilay endri-javatra ao amin'ny stack software quantum fototra amin'ny 2023.
Amin'ny taona 2025, mino izahay fa ireo mpamorona modely dia afaka mikaroka ireo rindranasa quantum amin'ny fianarana milina, fanatsarana, fitantanam-bola, ny siansa voajanahary, sy ny maro hafa. "Nandritra ny taona maro, ny supercomputers mifototra amin'ny CPU no asa fanodinana orinasa, miaraka amin'ny IBM mpamorona lehibe amin'ireo rafitra ireo," hoy izy nanohy.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, hitanay ny fiakaran'ny supercomputers AI-centric, izay iarahan'ny CPU sy ny GPU amin'ny rafitra goavambe mba hiatrehana ny enta-mavesatra AI.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Tian'ny IBM ny supercomputers quantum-ny mba hihazakazaka amin'ny 4000 qubits mahery